Misiyano pakati pemutual Funds uye ETFs? | Ehupfumi Zvemari
Misiyano pakati pemutual Funds uye ETFs?
Jose recio | | Mari, Zvigadzirwa zvemari
Kana paine zvigadzirwa zviviri zvinochengetedza a kumwe kufanana pakati pavo Izvi pasina mubvunzo mubatanidzwa wemari uye maEF anozivikanwa zviri nani sekushambadzira-anotengesa mari. Maumbirwo avo haana kana kuchinja uye izvo zvavakanyanya kusiyaniswa kubva kune iyo portfolio yemari midziyo iyo zvese zviri zviviri zvemari zvigadzirwa zvakaumbwa. Yekutanga yavo, kureva kuti, mari yekudyara ndeye modhi inoenderana nekuti ivo vakaumbwa senzvimbo yekudyara yakabatana, iyo inosanganisira kuunganidza pamwe mari kubva kune akasiyana investers, zvakasikwa kana zviri pamutemo. Nechinangwa chakajairika, icho chisiri chimwe kunze kwekuvaisa mari muzviridzwa zvakasiyana kana zviwanikwa zvemari.
Nepo pane zvinopesana, ETFs kana mari yekutsinhana-yakatengeswa musanganiswa wakasarudzika pakati pezvemari pamwe nekutenga uye kutengeswa kwezvikamu mumisika yemari. Kunyangwe ichokwadi kuti ne zvakanyanya kukwikwidza makomisheni kune zvido zvevadiki nevepakati varimi. Zviri mune zvimwe zvinhu izvo zvigadzirwa zvemari zvakasiyana uye ndipo patinozotarisa zvirimo muchinyorwa chino pakuisa mari kuchengetedza.
Chekutanga pane zvese, kusimbisa kuti mari yekudyara, shanduko yemari muna Kubvumbi yaive yakanaka kune akawanda mapoka, zvinoenderana neazvino dhata yakapihwa neAssociation of Collective Investment Institutions uye Pension Funds (Inverco). Kunze kwemari yakamisikidzwa (huwandu hwayo hunowedzera pamwedzi hunotsanangurwa zvakanyanya nekuchinjiswa kuchikamu ichi chemari dzakasiyana dzemari, mushure mekuburitswa neCNMV yedzidzo nyowani yedenderedzwa), uye mari yakasanganiswa yakasanganiswa (iyo kuwedzera kwemari kwakabatsira kuchinjisa kune kudanwa uku kwehombe yakasanganiswa mari yemari), iyo mari yepasirese uye mari yepasi rose yemari vakatungamira kukura kwehuwandu hwehupfumi ne751 uye 656 mamirioni euros, zvichiteerana.
1 Nguva pfupi-yakatarwa ETFs
2 Kusiyanisa kwemari yemari
3 Makomisheni uye mari mukutungamira kwayo
4 Kunonoka kutenga nekutengesa
Nguva pfupi-yakatarwa ETFs
Imwe yemakakatanwa akanyanya pakati pemhando mbiri dzekudyara ndeyekuti mari-yekuchinjana mari iri inokodzera munguva pfupi. Kusiyana nemari yekudyara inotarisana nenguva dzakareba kana dzakagadzikana dzekugara. Zvekuti mashandiro ayo anogona kugadziridzwa kune zvinotarisirwa nevamaneja pachavo, vese vekunze nekunze kwemiganhu yedu. Izvo zvakakosha kuti iwe utore izvi kuti urege kukanganisa mukati menguva dzakatarwa idzo dziri mbiri mhando dzekuchengetedza dzinoendeswa.
Nepo kune rumwe rutivi, zvinofanirwawo kusimbiswa izvozvi mari yekudyara inovavarira nguva pfupi yekugara havasangane nezvinotarisirwa pane izvo zvavakagadzirwa. Kusvika padanho rekuti iwo haabatsiri uye anogona kutotungamira kune akakosha kurasikirwa mune chikwereti cheizvi zvigadzirwa zvemari. Ichi chinhu chakanyanya kuitika chinoitika nevashambadzi vadiki nepakati vasingazive mamiriro ekubvumirana aya mamodheru ekudyara.
Kusiyanisa kwemari yemari
Chimwe chikamu chinosiyanisa chimwe uye chimwe chigadzirwa chemari ndicho chine chekuita neiyo kuumbwa kweportfolio yako yekuchengetedzeka kana mari yemari. Izvi zviri nenzira iyi nekuti mu ETFs kudyara kunowanzo fambiswa kubva kune imwechete yemari nhumbi. Inogona kuve yehunhu hwakasiyana: mari yakatarwa, masheya, zvigadzirwa mbishi kana simbi dzakakosha. Zvekuti nenzira iyi iwe unogona kutarisa pamusika mumwe chete, pasina kusiyanisa chikumbiro chekudyara. Mupfungwa iyi, zvakada kufanana nekutenga nekutengesa migove pamusika wemari pane kuisa mari yekudyara pachavo.
Nepo pane izvo zvinopesana, mari yekudyara ine hunhu hwainogona kukwana mari dzakasiyana dzemari. Kwete chete kubva kuequity, asiwo kubva kune yakamisirwa mari kana kunyangwe kubva kune yakasarudzika imwe nzira mamodheru. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri muchinzvimbo chekuchengetedza yako capital pane zvimwe zvinowedzera hukasha kufunga. Hazvishamise kuti njodzi dzakadzikiswa zvakanyanya kuburikidza nehurongwa hwakakosha hwekudyara. Kuva, muchidimbu, chimwe chezviratidzo zvaro zvakakosha uye izvo zvinozvisiyanisa kubva kune zvimwe zvigadzirwa zvemari.
Makomisheni uye mari mukutungamira kwayo
Muzviitiko zvese izvi, mashandiro avo anosanganisira mari mukutarisira kwayo uye kugadzirisa. Izvo zvinogona kusvika kusvika ku3% yehuwandu hwakazara mari. Asi kunyangwe iri mumari yekudyara imari yakadzama inokwanisa kuburitsa makomisheni akati wandei: manejimendi, dhipoziti kana yekupedzisira kuoneka sezviri kunzi budiriro. Iko kunokosha kwazvo kusarudza mari isingadhuri mukati mezvigadzirwa zvine hunhu hwakafanana. Senzira yekudyara kana kudzikisira izvi zvinodikanwa zvekushandisa.
Nepo kune rimwe divi, ETFs kana mari yekutsinhana-inotengeswa inoratidzirwa nekusanganisira makomisheni akapfava mune yakasara mari yekudyara kana mamodheru ekuchengetedza. Nemitengo izvo chaizvo inogona kufungidzirwa nevashambadzi vadiki nepakati. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi kunogona kukanganisa kusarudzwa kweizvi zvigadzirwa zvemari. Saka kuti nenzira iyi, kuchengetedza mune aya mashandiro kunogona kusimudzirwa kubva zvino zvichienda mberi.
Kunonoka kutenga nekutengesa
Mune izvo zvavanoita zvinowirirana, mari dzekudyara uye dzakanyorwa ndedzekuti mabasa ekutenga nekutengesa haasi epakarepo. Kana zvisiri, pane kudaro, ivo vanowanzo gadzira muviri mukati memazuva maviri kana matatu ekumisikidza iwo akateerana ekuraira. Ichi chinhu chinokurudzira kushomeka hakusi kukurumidza Mune account yekuchengetedza, zvichave zvakafanira kumirira mari yemari kuti iende kuaccount yazvino.
Naizvozvo, iwo haasi akakodzera mafambiro ekuita nekukurumidza uye zvakanyanya kuvandudzwa mashandiro pazuva rimwe chete. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti mari dzekudyara dzinotadza kubhadhara munguva pfupi yakadaro. Iko kudyara mari hakuwanzo muchinzvimbo chekukoshesa pamusoro pe1%. Chimwe chinhu icho hachinyatso kuitika ne kufamba kunoendeswa kubva kumisika yemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Misiyano pakati pemutual Funds uye ETFs?
Iwe unofunga inguva yekuhaya chirongwa chepenjeni?